Dhaamsa Obbolummaa Cufa Muslimtoota Itiyoophiyaatiif – Wiirtuu Odeeffannoo Muslimtoota Oromiyaa
March 24, 2013 admin Uncategorized 0
Kabajamtoota Jaalatamoo Muslimtoota Itiyoophiyaa bakka jirtan cufattuu
Assalaamu Aleeykum warahmatullaahi wabarakaatuhu?
Nagaya Rabbiititti aansuun dhaamsi ani qabu akka itti aanu kana ta’a.
Akkumma beekkamu Muslimtoonni Itiyoophiyaa biyya keessaa fii biyya alaattis Daba mootummaan Itiyoophiyaa Muslimtoota Biyyattii irratti raawwataa turee fii jiru mormuudhaan sagalee isaanii karaa danda’ame cufaan dhageessisaa jiran.
Haata’u malee qaamni mootummaa dhiibbaa Muslimtootarratti raawwataa jiru yeroo kamuu caalaa jabeessuu malee bifa kamiinuu laaffisurratti hin argamu.
Nuti Muslimtoonni Itiyoophiyaa akkuma lammii Itiyoophiyaa kamiiyyuu dirqama mootummaa kamuu raawwachuu irraa yeroo kamuu waan duubatti hafne hin qabnu Garuu mootummaan dirqama lammii biyyattii ka ufirratti fudhate wallaalee mirga ummata Islaamaa sarbuun daba hagana hin jedhamne Muslima irratti raawwataa jira.
Maarree nuti Muslimtoonni Itiyoophiyaa haga silaa Obsuun nurraa malu obsinee jirra haa ta’u malee rakkoon ummata Muslimaa yeroo gara yerootti hammaataa deemuu malee furmaata argataa hin jirru mootummaan hegeree keenna dhaamsee jaamsuuf shirri inni xaxuu fii wanni inni godhaa jiru hagana jedhamee waan himamuu miti sanniin keessa:
v Barattoota Muslimaa yuunibarsitii irraa ari’uu.
v Qur’aanni akka hin qara’amne dhoogguu.
v Manneen Barnootaa Islaamaati fii dhaabilee Islaamaa adda addaa akkasumas Masjiiddan diiysisuu.
v Namoota amantaa Islaamaatiif dubbachuu danda’an hidhuu fii sodaachisuu akkasumas akka biyyaa bayan taasisuu.
v Gamtaa/walitti dhufanii akka hin Salaanne fii Hajjii malee Umraan ammaa achi akka hin godhamnee akkasumas sabaa himaaleen Isalaamaa Biyyatti keessatti akka hin maxxanfamne godhuu fii ka biros raawwataa jira.
Maarree nuti Ummanni Muslimaa dirqama amantiin keenna nurraa qabu raawwatuun dirqama keenna ta’uu beeynee cinaan tokko mormaa cinaan tokko rafuu osoo hin taane gamtaan mormachuu qabna Warri haga ammaa mormii dhageessisaa jiru sunis Muslimuma akka keenna ka mootummama nuti jala jirru jala jiranii fii lubbuma akka nuti qabnuu ka qaban ta’uu beeynee sochii keennaan isaanitti makamuu qabna sodaan eessumaanuu nu hin gayu, warri qawween afaan keessa kaayamtee itti dhukaafamtee lubbuun isaanii darbite fii ka yeroo ammaa mana hidhaa keessatti lubbuu isaaniitiin taphatamaa jiru sunis Amantima kanaafi malee dhimma dhuunfaa isaanitiifii miti!
Kanaafuu cufti keennaa Lubbuu teenna keessa deebinee haa uflaallu Guyyaa Boruus Rabbitti maal akka himnu haa xiinxallinu isiniin jechaa dhaamsa kiyya asumarratti goolaba.